Isitshayina Girls Incoko ye-Android - APK Ukhuphele
Isitshayina Girls Incoko ye-Android – APK Ukhuphele
Ukuba ufuna ukuba idityanisiwe ne-china kwindawo Isitshayina Girls Incoko uyakwazi ukwenza abahlobo kunye entsha iqela abantu kwaye abo iqela ukwenza amazing abahlobo, kwaye ungabona ukuba uyonwabele nabo girls apha ngexesha chatting umntu okanye kwi-girls’ iqela xa uthumela umdla kwaye umyalezo luphindo.
Ngoko ke, ukuba ufuna kuba mnandi kwaye ujonge kuba i-intanethi chatting app, ngoko ke kufuneka anayithathela kwenzeka ilungelo ndawo. Le app delivers yonke into kufuneka silindele ukusuka enjalo apps kwaye nkqu imisela bar ukuba kakhulu inqanaba yi-umnikelo jikelele amour incoko kwaye okungaziwayo ukuncokola nge-girls, kwaye zonke iincwadi ezifumanekayo for Free.
Share eli-App ne-abahlobo bakho ngoko ke enye into kukhokelela abanye, ngoko ke wonke umntu ifakiwe kunye omnye nomnye ngokusebenzisa intlalo-media networks
QAPHELA: KWIMEKO NA VOILENCE MALUNGA (SWEARING, FLOODING, HARASSING, SPAMMING, WAMEMA ENGELILO INCOKO, KWENDLELA ISITHUKO OKANYE CYBER ATTACK) USEBENZISA UKUKHATYWA NGAPHANDLE. Ngokudibanisa tag amazwi ukuba zichaza kuba Imidlalo Apps, nisolko ekuncedeni ukwenza ezi Imidlalo kwaye Apps kuba ngaphezulu discoverable zezinye Ividiyo Dating abasebenzisi
← Jonga kwi Isitshayina Inkcubeko kunye Dating Lovelorn
Njani Ukufumana Acquainted kwi-Intanethi kunye A Guy Usapho kwaye budlelwane nabanye →